Jehovha anoonekwa ari mutemberi yake (1-4)
“Mutsvene, mutsvene, mutsvene, Jehovha” (3)
Miromo yaIsaya inocheneswa (5-7)
Isaya anotumwa (8-10)
“Ndiri pano! Nditumei!” (8)
“Kusvikira riini, haiwa Jehovha?” (11-13)
6 Gore rakafa Mambo Uziya,+ ndakaona Jehovha akagara pachigaro cheumambo chaiva pamusoro uye pakakwirira,+ uye nguo yake, nechekuzasi kwayo yakanga yakazadza temberi. 2 Maserafi akanga akamira kumusoro kwake; rimwe nerimwe riine mapapiro 6. Rimwe nerimwe* rainge rakavhara chiso charo nemaviri, rakavhara tsoka dzaro nemaviri, uye raibhururuka nemaviri. 3 Uye rimwe rakashevedzera kune rimwe richiti: “Mutsvene, mutsvene, mutsvene, iye Jehovha wemauto.+ Nyika yese izere nekubwinya kwake.” 4 Magwatidziro* akazununguswa nekushevedzera kwacho,* uye imba yacho yakazara neutsi.+ 5 Ndakabva ndati: “Ndine nhamo! Ndangofanana nemunhu afa,*Nekuti ndiri munhu ane miromo isina kuchena,Uye ndinogara pakati pevanhu vane miromo isina kuchena;+Nekuti maziso angu aona Mambo, iye Jehovha wemauto pachake!” 6 Rimwe remaserafi acho rakabva rabhururuka richiuya kwandiri, uye muruoko rwaro maiva nezimbe rinopfuta+ rarakanga rabvisa paatari nembato.*+ 7 Rakagumha muromo wangu rikati: “Waonaka! Iri ragumha muromo wako. Mhosva yako yabviswa,Uye chivi chako chayananisirwa.” 8 Ndakabva ndanzwa inzwi raJehovha richiti: “Ndichatuma ani, uye ndiani achatiendera?”+ Ini ndikati: “Ndiri pano! Nditumei!”+ 9 Iye akapindura achiti: “Enda kuvanhu ava unoti: ‘Muchanzwa manzwazve,Asi hamuzonzwisisi;Muchaona maonazve,Asi hapana kana ruzivo rwamuchawana.’+ 10 Ita kuti mwoyo yevanhu ava irege kuteerera,+Ita kuti nzeve dzavo dzisanzwa,+Uye nama maziso avo,Kuti maziso avo arege kuonaUye nzeve dzavo dzirege kunzwa,Kuti mwoyo yavo irege kunzwisisaUye kuti varege kutendeuka voporeswa.” 11 Ndakabva ndati: “Kusvikira riini, haiwa Jehovha?” Iye akati: “Kusvikira maguta aparara kuita matongo, asisina anogara maariUye dzimba dzisisina vanhuUye nyika yaparara, isisina chinhu;+ 12 Kusvikira Jehovha aendesa vanhu kure kure+Uye kusvikira nzvimbo yakakura yenyika yacho yava dongo. 13 “Asi mairi muchasara chikamu chimwe chete pazvikamu gumi, uye chichapiswa zvakare. Chichaita semuti mukuru uye semuti wemuoku, unoti kana watemwa panosara chigutsa; vana* vatsvene ndivo vachava chigutsa chacho.”
^ ChiHeb., “Iro.”
^ ChiHeb., “neinzwi reaishevedzera.”
^ ChiHeb., “Ndanyararidzwa.”
^ Uyu mudziyo wakaita sechigero kana pinjisi.
^ Kana kuti, “mbeu.”